ဈေးကြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ Xiaomi ရဲ့ နောက်ကွယ် - PX
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ အနာဂတ် Xiaomi ရဲ့ Smartphone တွေ ဈေးကြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက် စိတ်နာနေတဲ့ Mi Fan တွေနဲ့ ဈေးကြီးရင် P2P မဖြစ်တော့ဘူး၊ ဈေးကြီးတိုင်း Flagship ဖြစ်ရောလား ဆိုတဲ့ Mi မကြိုက်သူတစ်ချို့တို့ကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ မြင်တွေ့ရမှာပါ။ P2P Brand တစ်ခုအဖြစ် နာမည်ကြီးလာတဲ့ Xiaomi ရဲ့ CEO Lei Jun အနေနဲ့ ခုလိုစကားမျိုးကြေငြာတာဟာ အိပ်မက်ကနေ တစ်ရေးနိုးပြီး ယောင်ယမ်းထအော်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်တာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒါဆို အခုကြေငြာချက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေစောင့်ကြိုနေမလဲဆိုတဲ့အတွေးက ဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်။
Budget, Mid-range, High End ဘယ်အမျိုးအစားမှာဖြစ်ဖြစ် Series တစ်ခုရဲ့ ဒီနှစ် Model ဟာ မနှစ်က Model ထက် ဈေးနဲသွားတယ်ဆိုတာ Smartphone လောကမှာ မကြားဖူးသလောက် ရှားပါးတဲ့ဖြစ်ရပ်ပါ။ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်လာတဲ့ Hardware ပိုင်း၊ Software ပိုင်းတွေနဲ့အတူ Smartphone တွေရဲ့ ရောင်းဈေးဟာ Flagship Level မှာဆိုရင် Model တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား အနဲဆုံး $50 ကနေ $150 ဝန်းကျင်အထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။
Xiaomi Mi9ရဲ့ Basic Model ဈေးဟာ $450 ကနေ စပါတယ်။ ဒါဆို တိုးတက်လာမယ့် Specification တွေပေါ်မူတည်ပြီး နောက်လာမယ့် Mi Series ဈေးဟာ အနိမ့်ဆုံး $500 ကနေ စလာမှာပါ။ တကယ်တော့ Mi9မထွက်ခင်ကတည်းက “သူ့ရဲ့ဈေးဟာ Mi 8 ထက် သိသိသာသာများလာမယ်၊ ဒါပေမယ့် လူတွေလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ဈေး ဖြစ်မှာပါ” ဆိုပြီး Lei Jun အနေနဲ့ Weibo ကနေ ကြိုအသိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင် နောက်ထုတ်မယ့် Mi Series ဟာ $600 လောက်ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် Xiaomi ရဲ့ဖုန်းတွေ ဈေးကြီးလာမယ်ဆိုတာ အဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။
Xiaomi ရဲ့ Smartphone တွေ ဈေးကြီးမယ့်အကြောင်း နေရာအတော်များများမှာတွေ့နေရပေမယ့် အဲဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ “ဖုန်းတွေဈေးကြီးလာမယ်ဆိုပေမယ့် Xiaomi အနေနဲ့ Product တစ်ခုစီကနေ အမြတ် ၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ယူမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ ဆက်ပြီးကျင့်သုံးသွားမှာပါ” လို့ Lei Jun ဆက်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုတော့ လူပြောနည်းနေတာ သွားတွေ့ရတယ်။ တကယ်တော့ Xiaomi Smartphone တွေဟာ P2P ကောင်းမွန်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ Online Marketing ကို အဓိကသုံးပြီး ကြော်ငြာစရိတ်ချွေတာနိုင်တာ၊ Online Sales ကို အဓိကအားပြုရောင်းချတာ စတဲ့အချက်တွေအပြင်ဖုန်းအပါအဝင် Mi Product တိုင်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို အခွန်အခထည့်ပေါင်းပြီး ကျသင့်ငွေရဲ့ 5% ကိုပဲ အမြတ်အစွန်းအဖြစ် တွက်ယူခြင်းလဲ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Flagship Smartphone တွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်တဲ့အခါမှာ P2P Brand တွေကြုံတွေ့ရတဲ့ အဓိကအခက်အခဲက ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ နည်းပညာပိုင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်ပါ။ Poco Phone နဲ့ ဥပမာပေးရရင် $300 နဲ့ရောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအပေါ် 5% အမြတ်နုတ်ရင် ကျန်တဲ့အရင်းက $285 ရှိပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အခွန်အခ၊ တပ်ဆင်မှုစရိတ်၊ Software ပိုင်း စသည်ဖြင့်စရိတ်တွေထပ်နုတ်ရင် သူ့ရဲ့ Hardware ပိုင်းအသုံးစရိတ်ဟာ $200 ကျန်ဖို့တောင် အတော်ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုဖုန်းတစ်လုံးဟာ Hardware ပစ္စည်းဖိုးတင် $300 နဲ့ $400 ကြားသုံးပြီး ရောင်းဈေး ၂ဆနီးနီးရှိတဲ့ဖုန်းတွေကို Overall Quality ပိုင်းမှာ သူတင်ကိုယ်တင်ယှဉ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီတော့ Xiaomi အနေနဲ့ သူတို့ Smartphone တွေ ဈေးနှုန်းနည်းပါးမှုအပေါ် ဟိုလျှော့၊ ဒီခိုထားမလားဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့အမြင်ကို ပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင် ခုထက်ပိုကောင်းတဲ့ Hardware, Technology တွေကို ထပ်ဖြည့်ဖို့ သေချာပေါက်ကြိုးစားရမှာမို့ အမြတ်ကို 5% ထက်ပိုမတင်ရင်တောင် Overall Product Price ဟာ သေချာပေါက်မြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်။
ဈေးကြီးသွားရင် Xiaomi ရဲ့ P2P Plan ပျက်ပြီလား???
ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေက Xiaomi ကနေ Independent Brand အဖြစ်ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့ Redmi ဆီမှာရှိပါတယ်။ Redmi Brand နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ စထွက်ကတည်းက Xiaomi ဟာ Flagship Killer ကနေ Flagship Level ကို ခုန်တက်တော့မယ်လို့ ဒဲ့တစ်မျိုး၊ သွယ်ဝိုက်ပြီးတစ်ဖုံ ကြုံတိုင်းရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ Xiaomi အနေနဲ့ Flagship Level ကို တက်လှမ်းဖို့ဆိုရင် သူတို့ High-End Series တွေကို $500 အောက်မှာရပ်တည်ခိုင်းဖို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဥပမာပြရရင် OnePlus လို Killer Brand အနေနဲ့တောင် Flagship Level ကိုတက်လှမ်းဖို့ကြိုးစားရင်း ဈေးတွေတဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာခဲ့ပြီ။ (OnePlus7မှာလည်း ခုထက်ဈေးပိုလာဖို့ပဲရှိတယ်) ပြီးတော့ Flagship Standard လို့ ဆိုနိုင်မယ့် IP Rating, Stereo Speaker, High Res Display တို့လို Feature တွေထပ်ထည့်ဖို့ဆိုတာက ဖုန်းရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကို ပိုပြီးမြင့်မားစေပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အရင်လို P2P ဖုန်းတွေကို လိုချင်ရင် Redmi နဲ့ Poco ကို အဓိကအားကိုးရမှာဖြစ်ပြီး Xiaomi အနေနဲ့ $1000 တန် Premium Flagship တွေကို မတတ်နိုင်၊ မသုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက် Flagship Segment မှာ ရပ်တည်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ (ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ Level မှာတော့ P2P တန်နေဦးမှာပါပဲ)
ဈေးကြီးသွားရုံနဲ့ Flagship ဖုန်းဖြစ်ရောလား???
တကယ်လို့ ဈေးတင်၊ Spec မြှင့်တိုင်း Flagship Level ရောက်ကြေးဆိုရင် OPPO နဲ့ Vivo တို့ Mid-range မှာတောင် ရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Flagship Level ကို တက်လှမ်းဖို့ အခက်ခဲဆုံးအရာက Brand Image ပါ။ Apple, Samsung တို့မှာ $1000 တန် Flagship တွေကို လူတွေမက်မက်မောမော ဝယ်ကြတယ်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ Brand Image အပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့လည်း အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။
Brand Image မြှင့်တင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကောင်းဆုံးဥပမာဆိုရင် Huawei ကိုပဲ အဓိကလက်ညှိုးထိုးရမှာပါ။ တစ်ချိန်က P2P ဈေးကွက်မှာ ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ Huawei ဟာ Flagship Level ကိုတက်လှမ်းဖို့ Leica နဲ့ပူးပေါင်းပြီး သူတို့ Smartphone Camera တွေကို လူကြိုက်များလာအောင် အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ Home Product တွေနဲ့ Ecosystem တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးပြီး ဥရောပကို တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေ ထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ Xiaomi အနေနဲ့ Camera ပိုင်းအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ Light နဲ့ပူးပေါင်းမှုဟာ သူတို့ရဲ့ Flagship Level ကို တက်လှမ်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ အထောက်အကူဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်ဆို ဈေးကြီးပါမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ Xiaomi ရဲ့ နောက်ကွယ်ကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆိုလိုရင်းတွေကို အကြမ်းဖျဉ်းနားလည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ Water Resistance, Super AMOLED, Stereo Speaker စသည်ဖြင့် Feature တွေကို Xiaomi မှာပါစေချင်သူတွေအတွက် ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းစတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုတော့ပေးဆပ်ရစမြဲပါ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ Killer ထက်ပိုတဲ့ Flagship Smartphone တွေနဲ့ Xiaomi ရဲ့အနာဂတ်ကို မျှော်လင့်စောင့်စားချင်မိပါတယ်။
A13 Chipset ပါဝင်တဲ့ iPhone SE အသစ်ကို ၂၀၂၀ မတ်လ မှာစတင်မိတ်ဆက်ပေးဖွယ်ရှိ